I Jesoa dia naterak'i Maria
Alarobia 18 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Masindahy Matio 1, 18-24.
Andro fahavalo mialoha ny fankalazana ny Noely isika anio, tarihan'ny Evanjely hibanjina ny toetra nananan'i Masindahy Josefa, ilay Ray nanankinan'Andriamanitra ny zanany.
Filazana ny Razan'i Jesoa Kristy
Naseho ny : 17 desambra 2019
Talata 17 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjelin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Masindahy Matio 1, 1-17.
Ahariharin'i Masindahy Matio tamintsika teo ny fototra niavian'i Kristy, ilay Mesia. Tsy zavatra tongatonga ho azy fa fandaharan'Andriamanitra, mba hiseho sy ho hita miharihary ny firaisany amin'ny toetra maha olombelona antsika sy ny famonjena antsika amin'ny alalan'ny Zanany, hahazoan'ny rehetra ny ny fahafahana sy ny fiadanana marina.
Pejy 44 amin'ny 48